android ဖုန်းများအတွက် Caller ID ကို app ကိုအတူမှတ်စုများ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ » Caller ID ကိုအတူမှတ်စုများ
Caller ID ကို APK ကိုအတူမှတ်စုများ
မှတ်စုများကိုသင်အတွေ့အကြုံကိုယူပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုးရိုးမှတ်စုကိုငါပေးမည်။ မှတ်စု app ကိုရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူတာဒါပေမယ့်လည်းလျင်မြန်စွာကြောင့်လူမှုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အီးမေးလ်, ရှာဖွေရေး function ကို, ဒေတာ backup လုပ်ထားမှတဆင့်မျှဝေနှင့် features.As Android အတွက်ထိပ်တန်းမှတ်စုများ app ကို restore နိုင်သည့်တစ်ဦးမှလုပျစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်တကွကြွလာသည်ကိုမသာ အများကြီးကြီးမြတ် features တွေ့မှတ်စု pad ပါထက်ပိုအောင်နှင့်အတူ။
မှတ်စုများသင်၏မှတ်စုများဆက်သွယ် & အားကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်အတူတကွတောင်းဆိုထားသည်။ ဒါဟာသင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ-to-ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်နှင့်သင်၏မှတ်စုဆက်သွယ်သော app ကိုယူပြီးအကောင်းဆုံးကိုမှတ်ချက်ပါပဲ။ app ကိုလည်းသင်ခေါ်ဆိုသူ၏အပေါ် ယူ. နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ပြသထားတယ်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ဖုန်းအူနေစဉ်သင်ကအမှန်တကယ်အချိန်၌တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်အလွယ်တကူအစောပိုင်းကသင်ဆွေးနွေးတင်ပြအဘယ်အရာကိုသတိရဤနည်း။
app ကိုယူပြီးရုံမှတ်စုတစ်ခုထက်ပိုပါကလည်းခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ရုံ 1 ကလစ်နဲ့မှတ်စုအမည်နှင့်အရေအတွက်ကထပ်ပြောသည်။ ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကွင်းအတွက် notepad app ကိုချက်ချင်းခေါ်ဆိုသတ်မှတ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းစာအုပ်အတွင်းပင်သူမြားမဟုတျ။ သငျသညျထဆွဲထားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်စု app ကိုသငျသညျ, သင့်အဆက်အသွယ်ဖို့ဖော်ထုတ်ခေါ်ဆိုသူ၏ချွေတာကိုပြန်တောင်းဆို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို SMS ပေးပို့ခြင်းများကဲ့သို့လက်တွေ့ကျတဲ့ရွေးချယ်မှုများပေးသည်။ ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေ click တစ်ချက်နဲ့ note ကိုယူပါ။
အဘယ်အရာကိုဒီအခမဲ့ notepad app ထဲမှာထည့်သွင်းမယ့်:
•မှတ်စုအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနဲ့အဆက်အသွယ်ကလင့်ထားသည် - ယခုသင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ-to-ခေါ်ဆိုခနိုင်ပါတယ်တိုက်ရိုက်မှတ်စုထဲကနေ
• ယူ. တည်းဖြတ်, ပို့ကုန်များနှင့်မစိုက်အားလုံး notepad entries တွေကိုရှုမြင်
•အလွယ်တကူသင်၏မှတ်စုများ Backup ကိုနှင့် restore
•, တဦးတည်းကလစ်နှင့်သင်၏ဖုန်းစာအုပ်အသစ်အဆက်အသွယ် Save နောက်ကျောကိုပဌနာသို့မဟုတ် SMS ပေးပို့
• 1 ဘီလီယံခန့် + နံပါတ်များနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း databases ကိုအတွက်ခေါ်ဆိုသူများနှင့်ရှာဖွေရေးနံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်
• spam များကိုနံပါတ်များကိုသန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်သတိပေးချက်များကိုရယူပါ
Caller ID ကိုအတူမှတ်စုများ
11.03 ကို MB
Appsbuyout Dev မှ
အရောင် Pad မှတ်ချက် - ...
(R) မှတ်စုစာအုပ် -
Quick Notepad - …
Solar Walk2အခမဲ့： နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏စွယ်စုံကျမ်း